Fomba fijery cosmic ho an'ny ovy - Gazety Rafitra ovy
в siansa, vaovao, fahitana, hetsika, Tekinika / teknolojia
Alohan'ny handehanana amin'ny dia lavitra an'habakabaka dia mila mianatra ny fomba fambolena sakafo eny amin'ny habakabaka ny olona, ​​hoy ny mpahay siansa avy ao amin'ny Akademia momba ny siansa momba ny fambolena ao Shina.
Na izany aza, ny vokatra maoderina dia tsy mahasoa sy mamokatra ampy ho an'ny fampiasana amin'ny toeram-pambolena an-habakabaka. Ny manam-pahaizana dia manolotra paikady hambolena zavamaniry azo hanina tanteraka mifototra amin'ny fandrosoana amin'ny bioteknolojia.
Ny ovy no vokatra tsara indrindra amin'ny fambolena an-habakabaka. Manana tombony manaraka ireto izy:
vokatra avo ny tubers, manan-karena amin`ny gliosida, afaka manome hery be dia be ho an`ny olombelona;
fanamorana ny fambolena amin'ny toeram-pambolena an-habakabaka;
ny mety hisian`ny fampandrosoana ara-dalàna ny zavamaniry mandritra ny sidina habakabaka.
Ankoatr'izay, ny ovy dia afaka miteraka amin'ny firaisana ara-nofo (amin'ny voa) sy amin'ny vegetative (mampiasa tubers). Ny botanista sinoa dia namolavola ny foto-kevitry ny WBEEP, izay tsy maintsy ampiana vaovao maromaro amin'ireo tombony ireo, ary noho izany dia ilaina izany:
- manafoana ny fototarazo tompon'andraikitra amin'ny fanangonana ny solanine mba hahatonga ny tampony azo hanina. Ny solanine, izay miaro ny zavamaniry amin'ny katsentsitra sy ny aretina, dia mahatonga ny tahony sy ny raviny ary ny voankazo misy poizina ho an'ny olombelona. Raha tsy izany, ny ovy dia azo ambolena miaraka amin'ny fototarazo avy amin'ny havany, voatabia, izay manangona solanine ihany koa, fa manova azy ho zavatra azo hanina ao amin'ny voankazo.
- mahatonga ny ovy hamokatra vitaminina sy otrikaina bebe kokoa. Aroso ny hanaovana izany amin’ny alalan’ny fanovana ny metabolisman’ny zavamaniry, izay hanery azy ireo handany akora manta bebe kokoa ary hampiasa ara-toekarena kokoa ireo singa simika vokarina ho an’ny filany manokana.
- hanatsarana ny fitomboan'ny tubers. Voalohany indrindra, azo atao izany amin'ny alàlan'ny fanatsarana ny photosynthesis sy ny fitaterana akora avy amin'ny ravina mankany amin'ny fakany, satria ny fiforonan'ny tubers no mitroka ny angovo azo avy amin'ny masoandro. Nisy zavatra mitovy amin'izany natao teo aloha ho an'ny vary sy paraky, ary manantena ny hamerina izany ho an'ny ovy ny mpahay siansa.
- hampitombo ny fahazakana amin'ny zezika. Ny zavamaniry dia mila singa simika maro ho an'ny fitomboana, indrindra ny azota sy ny phosphore, ary ny potasioma dia ilaina ihany koa amin'ny ovy. Ny filàna famatsiana ireo zezika avy amin'ny tany ireo dia azo ahena amin'ny alàlan'ny fanovana ny fakany sy ny fanatsarana ny fanjifana simika azy.
Na dia tsy hiseho atsy ho atsy aza ny filàna azo ampiharina amin'ny WBEEP amin'ny indostrian'ny habakabaka, ny mpahay siansa dia manolotra ny hamolavola zavamaniry mitovy amin'izany ankehitriny, satria mety ilaina amin'ny fambolena voly eto an-tany.
Tags: ny ho avyGMOovy tsy misy solanineovy eny amin'ny habakabakaGMO ovyShinazavamaniry manankarenazavamaniry azo hanina tanteraka
Aretina vaovao no hita tany Sina. Ovy
Ao amin'ny ovy mandritra ny vanim-potoana maniry sy tubers raha tehirizina any amin'ny faritany sinoa any Xinjiang, ireo mpahay siansa ao an-toerana dia nahita pathogen vaovao - Galactomyces ...
Vokatra ovy manan-karena andrasana any Shina
Ny ovy no hany vokatra azo ambolena mora foana amin'ny faritra rehetra ao Shina. Amin'ny taona 2018, ny famokarana ovy ao ...
Roskachestvo dia manolotra hanitatra ny lisitry ny bibikely mifehy ny fananana any Rosia
Ny famokarana ovy any Bolivia dia mitentina 22% amin'ny fangatahan'ny tsena